Diablo 2 Akamutswa: Ndeapi Makirasi Akanakisisa? - Game poindi - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Aug 22, 2021 | nhau, Mazano emutambo, Vhidhiyo mitambo
Kusarudza kirasi muDiablo 2 Yakamutswa ndiyo yekutanga sarudzo vatambi vachazofanira kuita mushure mekuburitswa kweBlizzard's nostalgic Hack'n'slay. Kusarudza iyo kirasi chaiyo inotaridza nzira iyo vateveri vachatamba nenzira yekutamba - sarudzo yekuvaka inotevera. Mukuita izvi, zvisinei, zvikanganiso zvinogona kugadziriswa - kunyangwe nemubhadharo wakakura mune dzimwe nguva. Diablo 2 Yakamutswa ichaburitswa munaGunyana 23 yePC uye zvinyararire.
Sezvakaita nemitambo yakawanda, vateveri vanozvibvunza zvakare panguva ino: Ndeipi kirasi yakanakisa muDiablo 2 Yakamutswa? Mumwe haakwanise kupa mhinduro yakajeka kune izvi, nekuti kusarudzwa kwekirasi kunongotarisa chombo icho mutambi anouraya nacho kuburikidza neSanctuary kubva zvino zvichienda mberi: Muroyi anopenya, anopisa uye anomisa mhomho yevanopikisa, asi anogona kumira zvishoma pane makirasi emelee, of which the barbarian is Kumiririra nzvimbo yepakati pakati pekukuvadza nekusimba. Iyo Paladin yakakodzera kune avo mafani vanofarira kutamba mumapoka uye vanoda kusimbisa shamwari. The Assassin, uyo akapinda mukutamba nekuwedzera kweShes of Destruction pamwe neDruid, anokambaira chinyararire. Iyo yekupedzisira inyanzvi yemashiripiti ezvisikwa, inogona kuraira mhuka kana kuchinja chimiro chake pachake. Iyo necromancer zvakare inotsamira kune shamwari dziri pakati. IAmazon, kune rumwe rutivi, isanganiswa yepedyo-renji uye refu-refu kurwisa, asi nekutarisa pakupfura.
Chinhu chimwe chinogona kuverengwa kubva pane tsananguro: Sarudzo yemakirasi muDiablo 2 Yakamutswa inosarudza iyo yekutanga yekutamba dhizaini, asi kwete hazvo nezvekuti iwe unokonzeresa kukuvadza kwakawanda kana kushoma. Izvi zvinonyanya kuvimbiswa nemidziyo, kusanganisira Runic midziyo.
Diablo 2 Akamutswa: Ndeapi Makirasi Kune Vanotanga?
MuDiablo 2 Akamutswa, zvakare, makirasi anobuda akakodzera semakirasi ekutanga kupfuura mamwe: Pamusoro pezvose, mutorwa, muroyi uye druid zvinofanirwa kutaurwa. Iyo Druid ndiye akajairwa ese-anotenderedza anogona kusuma iwe kune melee gameplay pasina kupira yakawandisa hunyanzvi hwekudzivirira. Izvo zvakapesana ndezvomuroyi, uyo anotsungirira zvishoma, asi anogona kubvisa nyore nyore vanopikisa kubva kure. The barbarian ndiye anodheerera - zviri nyore, asi ane nzvimbo yakawanda yehunyanzvi hwekuita. Hazvina mhosva kuti chii chaunosarudza pakusarudza kirasi yeDiablo 2 Yakamutswa - iwe unofanirwa kusarudza zvakanyatsonaka uye zvakanyatsonaka, nokuti kugadziriswa kweunyanzvi hakusi kudhura.
Kana uchinge wasarudza pamusoro pekirasi yekutanga, danho rinotevera nderokusarudza iyo inonzi "kuvaka". Izvi zvinotsanangura kuti hunyanzvi nemapoinzi ehunhu hunofanirwa kugovaniswa sei uye zvakare kuona kuti mutambi anozotamba sei. Iyo paladin, semuenzaniso, haisati iri yebakatwa-yakachena, anogona zvakare kutarisa pane mashiripiti matsvene uye, semuenzaniso, kukanda sando tsvene dzakamupoteredza. Zvakafanana neiyo druid: inogona kuridzwa senge melee, asi zvakare inoita inodarika chepfu wizard.
Iyo druid inogona kushandura chimiro chake uye inoita yakanaka ruoko-ku-ruoko kurwa. Mufananidzo: Blizzard
Misiyano yemutambo wemitambo inonyanya kujeka neiyo necromancer: Kana iwe ukaisa pfungwa pakusimbisa uyo asina kufa, iyo necromancer inotamba isingaite nekuti zvisikwa zvakarairwa zvinoita basa. Kana, kune rumwe rutivi, iwe uchitarisa pamashiripiti emapfupa, ipapo kufamba uye mashiripiti zvinongoerekana zvanyanya kukosha. Saka chii chinosarudza kana iwe wakazvisarudzira yakanakisa kirasi muDiablo 2 Yakamutswa ndiyo inovaka iwe yaunoda kutamba.
Zvinokurudzirwa kugadzirwa kwemakirasi:
Mhepo yakaoma: Ichi chivakwa inzvimbo yepakati pakati petsigiro uye inogumbura.
20 points imwe neimwe ndeye: cyclone armor • oak white • chamupupuri • chamupupuri • chamupupuri
Moto druid: Yakachena DPS inovaka inotarisa pane yekutanga kurwisa.
Mapoinzi makumi maviri ega ega ndee: Rukova rweMoto • Volcano • Amagedhoni • Dombo Rakanyungudutswa • Rift
Hammerdin Paladin: Hammerdin anokanda sando tsvene.
Mapoinzi makumi maviri ega ega ndea: Yakaropafadzwa Sando • Yakakomborerwa Vavariro • Simba • Kuisa pfungwa pachinhu chimwe • Tsvene Shield.
Smiter paladin: Iyo Smiter inosanganisa zvinogumbura uye kudzivirira.
Mapoinzi makumi maviri ega ega ndea: Chibhakera cheDenga - mapoinzi makumi maviri • Mheni inoera - mapoinzi makumi maviri • Kuvhundutsa kutsvene - mapoinzi makumi maviri
Remainder: Holy Shield - 10 points • Conviction - 10 points • Kupwanya - 1 point
Frenzy barbarian: Iyo Frenzy Barb imhuka yekumhanyisa chaiyo inoshandisa zvombo zviviri panguva imwe chete.
Mapoinzi makumi maviri ega ega ndea: Frenzy - mapoinzi makumi maviri • Kugona bakatwa - mapoinzi makumi maviri • Maodha ekurwa - mapoinzi makumi maviri • Kubheuka kaviri - mapoinzi makumi maviri • Kunyomba - mapoinzi makumi maviri
Zororo: Kuwedzera kumhanya - 1 poindi • Combat order - 1 point
Whirlwind barbarian: Chamupupuri chebarbarian chinotsamira pakuramba uye chamupupuri chinosimbiswa nesimba rekurwisa.
Mapoinzi makumi maviri ega ega ndee: Chamupupuri - mapoinzi makumi maviri • Kugona munondo - mapoinzi makumi maviri • Mhere - mapoinzi makumi maviri
Zororo: Natural resistance - 5 points • Yakawedzera kukurumidza - 5 points • Iron skin - 5 points • Berserker - 1 point • Combat order - 1 point
Bow amazon: The classic - the Amazon se "ranger".
Mapoinzi makumi maviri ega ega ndea: chirango - mapoinzi makumi maviri • mapoinzi akawanda - mapoinzi makumi maviri • valkyrie - mapoinzi makumi maviri
Remainder: Pierce - 5 zvibodzwa • Kurova kwakanyanya - 5 zvibodzwa • Kuboora - 5 mapoinzi • Dzivisa - 5 zvibodzwa • Dodge - 5 zvibodzwa • Dodge - 5 zvibodzwa
Javelin Amazon: Pfumo-amazon yakasimbiswa nemheni.
Mapoinzi makumi maviri ega ega ndea: Kuramwa mhosva - mapoinzi makumi maviri • Kurova kwemheni - mapoinzi makumi maviri • Kurova kwemagetsi - 20 points
Zvakasara: Kurova Kwakasimba - Mapoinzi mashanu • Kuboora - Mapoinzi mashanu • Nzvenga - Mapoinzi mashanu • Dodge - Mapoinzi mashanu • Dodge - Mapoinzi mashanu
Summoner Necromancer: Necromancer sezvaunomuziva - aine shamwari dzakawanda dzisina kufa.
Mapoinzi makumi maviri ega ega ndea: Simudza marangwanda - mapoinzi makumi maviri • Simudza kuputika kwechitunha - 20 mapoinzi • Simudza skeleton n'anga - 20 mapoinzi • Golem Championship - 20 mapoinzi
Bone Necromancer: Muroyi ari pedyo nen'anga. Anopfura nemashiripiti emapfupa.
Mapoinzi makumi maviri ega ega ndea: Pfumo rebhonzo - 20 zvibodzwa • Mazino - 20 zvibodzwa • Mudhuri webhonzo - 20 mapoinzi • Bone mweya - 20 zvibodzwa • Bone jeri - 20 points
Chisaririra: Tongolem - 1 point • Wedzera kukuvadzwa - 1 point • Bone rezvombo - 1 point • Simudzira - 1 point
Orb Muroyi: Yakasimba kwazvo, asi haisati iri kanoni yegirazi.
Mapoinzi makumi maviri ega ega ndea: Fireball - mapoinzi makumi maviri • Meteor - mapoinzi makumi maviri • Kudzora moto - mapoinzi makumi maviri • Bhora rakaomeswa - 20 mapoinzi.
Remainder: Firebolt - 1 point • Cold mastery - 5 points
Trap Assassin: Mhondi inoshanda nemisungo.
Mapoinzi makumi maviri ega ega ndea: Death Sentry - mapoinzi makumi maviri • Kumuka kweMoto - mapoinzi makumi maviri
Chaos Assassin: Yakasanganiswa kirasi ine kurwisa kwakaringana uye kudzivirira, asi kunonyengerera kutamba.
Mapoinzi makumi maviri ega ega ndea: Shadowmaster - mapoinzi makumi maviri • Muchetura - mapoinzi makumi maviri • Kupera - mapoinzi makumi maviri • Kubata claw - 20 points
Chisaririra: kukurumidza kusimudzira - 1 point • kubhururuka kwekite - 1 point • chombo chepfu - 1 point • blade guard - 1 point
Miti yehunyanzvi inobvumira mamwe akawanda kuvaka. Chaizvoizvo, zvese zvine simba zvinovaka zvemakirasi muDiablo 2 Akamutswa anozivikanwa nekuti hunyanzvi hahuna kushanduka kana uchienzaniswa nepakutanga, asi kana iwe uchida chaizvo kusvika kune iyo zita nenzira ye nostalgic, iwe unofanirwa kunge uchitamba denderedzwa rako rekutanga pasina mutungamiriri. uye kuedza. Saka iwe unogona kuzvitsvagira wega zvinoshanda nezvisingaite - izvo zvinotora nguva, asi zviri padyo nekunzwa kwemutambo kubva kumashure. Kwete chete hunyanzvi uye kuvaka, asiwo giya uye zviperengo zvinowedzera kukwidziridza kuDPS, asi ndiyo imwe nyaya.
Hunyanzvi hweDIABLO* 49,00 EUR tenga
Kare Scarface 1920: Mutambo webhodhi muGerman muSpieleschmiede
Inotevera WWE 2K22 inouya gare gare kupfuura zvaitarisirwa: New trailer
Pulp Invasion: Maviri X2 ekuwedzera muSpieleschmiede
Halloween: mitambo gumi inotyisa yebhodhi yevana
Cyberpunk 2077: Chokwadi Hachitengesi Mitambo [comment]
Vatengesi veMugwagwa Wakasviba: Skellig Mitambo inounza bhodhi mutambo kuGerman